You are here: Home Home Bandhigga Buugaagta Caalamiga Ee Hargeysa
Beerta Xorriyadda: 22-26 Juulay 2011
09.00 subaxnimo – 08.00 fiidnimo
Ururka Redsea Online.Com Cultural Foundation, Kayd Somali Arts & Culture iyo ILAYS farxad ayey u tahay inay ku dhawaaqaan in la qaban doono Bandhigga Buugaagta Caalamiga ee Hargeysa sannadkan 2011.
Bandhigga Buugaagta Caalamiga ee Hargeysa waa kulan dhaqammeedka ugu doorka roon ee ka dhaca Somaliland. Waana kan ugu baaxadda weyn ee dalka gudihiisa la isugu yimaaddo. Waa calan-sidaha ereyga ereyga qoran iyo kan odhaaheedba ee Geeska Afrika sannad walba isu keena qoraaga, gabyaaga, fannaaniinta, iyo mufakiriinta ka kala socda Somaliland iyo adduunka si loo soo bandhigo waxsoosaarkooda iyo halabuurkooda dhinaca qoraalka, fanka, iyo suugaanta. Kulankaas oo fursadda ugu wacan u suura gelinaya in lays la wadaago, laga doodo, laga xog warramo, casharrona lagu kala korodhsado arrimaha qiimaha leh ee la isugu yimid.
Mawduuca carwada sannakan halqabadka u ahi waa: ‘Xusuus-Wadareedka’. Kaas oo martida la soo dhoweynayo iyo madashuba ka qaybqaadan doonaan iyagoo ka wada doodaya. Dhinaca kale ee dhacdooyinka barnaamijku waxay culayska saarayaan oo ka kooban yihiin daah-fur buugaag cusub, jeedin gabayo, doodwadaagyo, riwaayado masraxi ah, iyo qaabab kale oo fanka iyo farshaxan dhaqammeedka lagu cabbirayo.
Bandhigga Buugaagta Caalamiga ee Hargeysa waxaa sharaf u ah inay sannadkan soo marti qaaddo kuna maamuusto Yaasmiin Maxamuud oo ka mid ah martida akhyaarta ah ee sida weyn loo soo dhoweynayo. Yaasmiin waa qoraa, waa Sheeko-curiso, waa hawlwadeen si firfircoon ugu fooggan danaha beesha. Waxayna deggan tahay oo ku nooshahay dalka Maraykanka. Dhinaca qoraanimada, Yaasmiin waxay qortay oo af-ingriisi ku soo saartay qiso (novel) lagu magacaabo Nomad Diaries. Qoraalkaas oo ay si weyn ugu guulaysatay.
Nomad Diaries (Reer-guuraa Xusuusqorkii) waa qiso ka warramaysa qoys Soomaali ah oo nolol hodon ah ku jirey, nimce adduun ku haystay, markay u qaxeen Maraykanka wacdarihii ay qurbaha iyo degaankaa cusub kala kulmeen ee noloshoodii ku dambeysey. Xiisaha qoraalkaas ka dhashay ee weli ka taagan dalka Maraykanka gudihiisa iyo dibadiisaba ayey Yaasmiin Maxamuud madasha carwadan ka soo qaybgelaysa sannadkan la wadaagi doontaa.
Meelaha kale ee aan ka sed yarayn ee carwada sannadkani ku diiwaan geli doonto waa dhinaca buugaagta cusub ee la daah-furi doono lana soo bandhigayo. Kuwaas oo ay ka mid yihiin:
Beerta Xaywaanka (Animal Farm) uu qoray George Orwell, uuna tarjumay Maxamed Yuusuf Cartan. Awoodda iyo talada sida xun loogu tagri falo dhibta ka dhalata ayey ka digaysaa.
Shufbeel, tiraab Soomaaliyeed, uu qoray Siciid Jaamac Xuseen, oo isugu jira sheekooyin gaagaaban iyo maqaalado murti iyo maawelo laga la kulmayo
Baqayo Rogad, uu qoray Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan oo ka kooban 3 riwaayad-masraxeed oo gaagaaban: saddexduba dhibaatooyin bulshada ka jira taabanaya, in wax laga qabtona ay tahay farrinta ay gudbinayaan.
Baadi-sooc: waa diiwaan ay ku urursan yihiin xul ka tirsan maansooyinka abwaanka caanka ah ee Axmed Aw Geeddi oo isku soo dubbaridey Khalid Jaamac Qodax.
Iyo buugaag kale oo aad u tira badan oo sannadkan soo baxay.
tel: 00 39 338 9679505
Hargeysa International Book Fair 2011. July 22-26
website: www.hargeysabookfair.com | www.kayd.org | www.redsea-online.com